Hiriirfama (Wantoota Barruu)
Filannoo ammeetif dirqaalalee hiriira qindeessi.
Dhangii - Hiriira(wntoota filataman) (BarreessaaLibreOffice, Calc LibreOffice) fili
Fooyyeessi - Hiriira (wntoota filataman) (Fakkassaa LibreOffice) fili
Baafata haqaraa bani Hiriira(wntoota filataman) (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)
Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula bitaatti hiriirsa.
Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula mirgaatti hiriirsa.
Keewwata(oota) filatman fuula irratti handhuuressa.
Keewwata(oota) filataman gara muudanaalee fuula bittatti fi mirgaatti hiriirsa. Yoo barbaadde, dabalataanis diqaalalee hiriirfamaa sarara dhuma keewwataatif Dhangii - keewwata - Hiriirfama filachuun ifteessuu dandeessa.
Title is: Hiriirfama (Wantoota Barruu)